Kungani Kufanele Ukhethe ama-Silicone-Rubber Keypads
Izikhiphedi zerabic ze-Silicone zithambile ngendlela emangalisayo futhi zikhululekile ukuzisebenzisa uma ziqhathaniswa nezinye izinto. Ngenkathi ezinye izinto zilukhuni futhi kunzima ukuzisebenzisa, irabicic ye-silicone ithambile futhi inerabha. Kubalulekile futhi ukusho ukuthi izinkinobho ze-silicone = zerabha ziyamelana nokushisa okuphezulu. Ukuthi ...
Noma kunezindlela ezahlukahlukene zokwakha ikhiphedi yama-silicone-irabha, iningi libonisa ifomethi efana naleyo equkethe izinto zerabha ze-silicone ezungeze inkinobho eshintshana ngogesi phakathi nendawo. Ngezansi kwensimbi enjoloba ye-silicone kukhona izinto ezivumayo, ezinjengekhabhoni noma igolide. Ngezansi kwalokhu okuvumayo ...
Konke Odinga Ukwazi Nge-Silicone-Rubber Keypads
Izikhiphedi zerabic ze-Silicone ziye zaba ukukhetha okuthandwa kakhulu phakathi kwabanikazi bebhizinisi nonjiniyela bemishini. Ayaziwa nangokuthi izinkinobho ze-elastomeric, aphila ngokuqanjwa ngamagama awo ngokubonisa ukwakhiwa kwerabha eyenziwe nge-silicone ethambile. Ngenkathi ezinye izinkinobho eziningi zenziwe ngopulasitiki, lezi zenziwe nge-silicone-irabha ....